Top 2 Ụzọ Nyefee listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes
2 Mfe Ụzọ Nyefee listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes
Olee otú m akpali m listi ọkpụkpọ site na m iPhone ka iTunes? My kọmputa jiri, otú m na-amalite eji dị iche iche PC maka syncing m iPhone. M nwere niile m na ọdịnaya site ochie na kọmputa, ma ọ bụghị playlist. Mgbe m synced m iPhone ndị ọhụrụ na kọmputa, nwetara a ịdọ aka ná ntị na-ekwu ya ga-akwụsị ọdịnaya na m iPhone. Achọghị m ka m na-akwụsị playlist, biko nyere!
Dị ka ibe n'elu, chọrọ nyefee listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes n'ọbá akwụkwọ? OK, dị nnọọ ka anyị mee ya. Lee, m na kpuchie 2 ngwọta maka ajụjụ otú nyefee listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes:
Ngwọta 1: Copy listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes amamihe
Ngwọta 2: Import listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes site iTunes
Detuo listi ọkpụkpọ iji iTunes amamihe
Import listi ọkpụkpọ iji iTunes site iTunes
Ebe a ga-amasị m ịme ka ị otú nyefee listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes na Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ngwá ọrụ a ga-enyere gị nyefee listi ọkpụkpọ site na gị iPhone na iTunes na songs, egwu na-adabere, Fim, na ndị ọzọ Ama, nke mgbe ha na nsogbu na-ị na-ahụ playlist na iTunes ma ike kpọọ ya. Na m nwere ike hụ na ị na otú a bụ 100% irè. Lee ndị nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Run Wondershare TunesGo
Pịa Download ibudata Wondershare TunesGo na wụnye ya na kọmputa gị. Ẹkedori ya ozugbo. Jiri gị iPhone eriri USB jikọọ gị iPhone gị na kọmputa. Mgbe ejikọrọ ịga nke ọma, ị pụrụ ịhụ window nke Wondershare TunesGo anya ka screenshot n'akụkụ aka nri
Nzọụkwụ 2. Import playlist si iphone ka itune
Ọ bụrụ na ị na-eji Wondershare TunesGo (Mac) nyefee listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes on Mac, ị kwesịrị ị na pịa Music na n'aka ekpe. Na mgbe ahụ ịchịkwa pịa playlist n'akụkụ aka nri. Họrọ Mbupụ na iTunes nyefee gị iPhone playlist gị Mac. Ọ bụrụ na ị na-eji Wondershare TunesGo Windows version, pịa Ndetuta egwu ọkpụkpọ na n'aka ekpe nke window. Họrọ chọrọ listi ọkpụkpọ na pịa triangle n'okpuru Mbupụ na bọtịnụ. Pịa Mbupụ na iTunes Library na-amalite na-ebufe usoro.
iTunes n'ezie awade nhọrọ maka gị nyefee playlist si iPhone ka iTunes. Na ọ bụ nnọọ mfe. Ozugbo ị nwere ike jikọọ gị iPhone na kọmputa gị, i nwere ike ime ya. Otú ọ dị, ihe ize ndụ ka na-adị na mgbe a na-edegharị listi ọkpụkpọ site na gị iPhone gị iTunes, ha na-egosi na sidebar nke iTunes, ma i nwere ike ịhụ nke Ama ma ọ bụ ihe ọ bụla songs na ha. Iji zere ọnọdụ, biko jide n'aka niile songs na listi ọkpụkpọ na-adị gị iTunes Library. Ọ bụrụ na, na-agbalị ụzọ ọzọ.
Ẹkedori gị iTunes Library, ma na gị Mac ma ọ bụ PC. Pịa iTunes View menu ma họrọ Gosi sidebar. Na-eji gị iPhone eriri USB jikọọ gị iPhone gị na kọmputa. Mgbe ha na-ejikọrọ, ị pụrụ ịhụ gị iPhone n'okpuru NGWAỌRỤ na sidebar.
Nzọụkwụ 2. Nyefee listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes
Pịa triangle n'akụkụ gị iPhone ikpughe ọbá akwụkwọ ahụ ihe gị iPhone. Si ebe a, ị pụrụ ịhụ niile listi ọkpụkpọ na gị iPhone. Họrọ ndetu egwu ọkpụkpọ na nri pịa ya (Mac ọrụ kwesịrị ịchịkwa pịa ya) na họrọ Export. Na kpaliri window, họrọ faịlụ format dị ka XML nke bụ ndabere usoro maka iTunes playlist na-azọpụta ya na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3. Import iPhone listi ọkpụkpọ iji iTunes
Pịa iTunes File menu na ịnyagharịa Library> Bubata Ndetuta egwu ọkpụkpọ. Na ọhụrụ meghere window, chọta na họrọ iPhone listi ọkpụkpọ na ị na exported gị na kọmputa. Tinye ha gị iTunes Library. Mgbe ebufe iPhone listi ọkpụkpọ site na gị iPhone gị iTunes Library, ị kwesịrị ị na ego ma ha na-adị irè ma ọ bụ. Bụrụ na ọ bụghị, ọ pụtara ụfọdụ songs na-adịghị gị iTunes Library. Na nke a, ị ga-agbalị na kwuru ụzọ ọzọ nyefee listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes na songs.
Video Tutorial: otú nyefee listi ọkpụkpọ site na iPhone ka Computer
Nyefee ihe niile si iPhone ka PC Nyefee
Otú nyefee Music si iPhone ka iTunes
Otú nyefee Music si Mac ka iPhone
Olee otú mmekọrịta Music si iTunes ka iPod
Olee otú Detuo VCF faịlụ ka iPhone
> Resource> iTunes> otú nyefee Playlist si iPhone ka iTunes on PC